Jaalaha yaryar waxay ku kulmaan Toulouse "si ay u sii wado dagaalka Macron" - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY »Caleenta Yellow ayaa ku kulantay Toulouse" si ay u sii wado dagaalka Macro "
Jaldiga jaalaha ah wuxuu ku kulmaa Toulouse "si uu u sii wado dagaalka Macro"
Waayo, abaabulka 22e Saturday, jaakadaha huruud ah waxaa lagu yaqaan in isku urursadaan in tiro ka 12 pm on Capitol Square ee Toulouse. The horjooguhu Heerka Sare-Garonne ayaa mamnuucday dhammaan dibad u dhexeeya am 10 21 iyo pm.
aayaadku waxaa hore u soo baxay ee Toulouse oo la kulmay dhowr dhacdooyinka dibad Saturday 13 April hor dibad-bax weyn ka Place duhurkii du Capitole qorsheeyay. Xeerka XXII ee Geela jaalle, Toulouse waxay u dhisan tahay caasimadda qaranka.
Ujeeddo: si loo muujiyo in abaabulidda aysan wiiqmin maalmo yar oo ka mid ah ogeysiisyada la filayoEmmanuel Macron si loo dhammeeyo doodda wayn. Jaakadaha Yellow ee City Pink ku tiirsan xoojiyo ka Bordeaux iyo Montpellier, iyo joogitaanka tirooyinka dibad baxa, Priscillia Ludosky ama Maxime Nicolle (aka "Fly fuushanba"), bararin sareysa. Waxay ahaayeen ilaa kuwii ka soo horjeeda 10 000 ee bishii Janaayo.
800 booliiska iyo gendarmeeshinka
Arintaan oo kale "rabto in ay dagaalka yeelato", Wasiirka Arrimaha Gudaha, Christophe Castaner, ayaa ka digay in ay jiri doonaan qalab "dhexdhexaad ah" oo leh in ka badan bilayska 800 iyo gendarmeeshiyada la geeyay waddooyinka.
Kulankan ayaa noqon doona kii ugu horreeyay tan iyo markii la bilaabay dhaqan-galinta Sharciga Ka-hortagga Sharciga Khamiista, soo bandhigida, iyo waxyaabo kale, dambi ah qarinta wajiga wajiga banaanbaxyada.
In Paris, xarunta dhexe ee bilayska ah ayaa soo saaray amar mamnuucaya kulan mid ka mid ah jaakadaha jaalaha on Elysees Champs iyo jidadka dadab. Si joogta ah ayaa lagu soo rogay tan iyo bartamihii bishii Maarso, mamnuucidda qayb ka mid ah diidmada welwelka sidoo kale tirada magaalooyinka kale, Lille, Lyon, Montauban ...
Shirarka waxaa sidoo kale lagu qorsheeyay Marseille, Grenoble ama Lille. Toddobaadkii hore, ficil XXI waxay soo ururiyeen 22 300 dadka waddooyinka, sida laga soo xigtay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, tirooyinka rasmiga ah ee ugu hooseeya tan iyo Bishii 11aad.
Qodobka Source: https://www.france24.com/fr/20190413-gilets-jaunes-toulouse-capitole-macron-samedi-mobilisation
Kubadda cagta: Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaatid bar-barashada CA-2019 - JeuneAfrique.com
Adolph Lele Lafrique ayaa ku martiqaadeysa dadka isticmaala internetka inay fursad u helaan dib u soo celinta nabadda